‘गाउँको मेलमिलाप’मा यस्ती देखिइन् प्रियंका कार्की (भिडियो) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
‘गाउँको मेलमिलाप’मा यस्ती देखिइन् प्रियंका कार्की (भिडियो)
बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८ मा प्रकाशित !
नायिका प्रियंका कार्की पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका हुन् । उनी आजकल दैनिकजसो केही न केहिको छायांकन,इभेन्ट तथा अरु कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भइरहेकी हुन्छिन् । चलचित्रको साथमा उनी विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियोहरूको सुटिङमा पनि व्यस्त हुने गर्छिन् ।
नायिका प्रियंका कार्की चलचित्र, विज्ञापन र म्युजिक भिडियोको साथमा मेलमिलापकर्ता पनि बनेकी छिन् । तर त्यो बास्ताविकतामा नभएर एउटा छोटो चलचित्रको लागि हो । सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लागि जाइका नेपालको सहयोगमा शुभ मिडिया होमले निर्माण गरेको छोटो चलचित्र ‘गाउँको मेलमिलाप’मा उनी मेलमिलापकर्ता बनेकी हुन् । चलचित्रमा उनले दुई जोडीको विवाद मिलाएकी छिन् ।
दीपक आचार्यको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘गाउँको मेलमिलाप’मा हरिजंग थापाको पटकथा तथा संवाद छ । दिनेश कुमार थपलियाको लेखनमा बनेको चलचित्रमा गोकुल अधिकारीको सिनेम्याटोग्राफी, अमन मानन्धर र अशोक चौधरीको सम्पादन छ । चलचित्रमा प्रियंकाको साथमा देशभक्त खनाल, मिश्री थापा, शम्भु थापा, प्रिया रिजाल, दीपक आचार्य, विनोद राई, काजी रम्तेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय छ ।
PREVIOUS POST Previous post: पर्यटकलाई लोभ्याउँदै जलविरे झरना
NEXT POST Next post: तीन जनाको मृत्यु हुने गरि स्कुटरमा ठक्कर दिने टिपरका चालक पक्राउ
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ १०, २०७५ १५:३८